သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ..
အခုမှ ဗင်ကူးဗား ကနေဒါက နှစ်ကူးအပြီး တစ်နာရီနဲ့သုံးဆယ့်ခုနှစ်မိနစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
Comment by minthant2009 — January 1, 2010 @ 3:53 am
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့နှစ်သစ်ပါ မရေ။
မရဲ့စာအုပ်လည်း စောစောကပဲဖတ်ပြီးသွားတယ်။ ၀တ္ထုလေးတွေ ကြိုက်တယ်။ ကဗျာလေးတွေရောပဲ။ အကြိုက်ဆုံးတွေက ကျွန်မချစ်တဲ့သစ်တစ်ပင်၊ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်လေးနှစ်စောင်၊ ချစ်သူ့အိမ်၊ ရေဆန်ငါးနဲ့ ဆောင်းအိပ်မက်။ ရုံးကမမများ၊ လွင်ပြင်ခရီး၊ ဂယက်၊ နံပါတ်(၈)များနှင့်ခရီးထွက်ခြင်း၊ ပင်ဂွင်နဲ့ဆော်လမွန်တို့အိမ်အပြန် တို့ကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ၀တ္ထုအသစ်တွေ ဆက်ရေးပါအုံးနော်။
Comment by ဇွှန်မိုးစက် — January 1, 2010 @ 4:08 am
Comment by အပြုံးပန်း — January 1, 2010 @ 4:13 am
ဟုတ်လား မရေ ဒီမှာတော့ နှစ်ကူးပြီးတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးသွားပြီလေ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မ
Comment by Waing — January 1, 2010 @ 4:20 am
Comment by လုံမလေး — January 1, 2010 @ 5:01 am
Comment by တောသားလေး — January 1, 2010 @ 6:53 am
(ဗျောင်းဗြန်ဂျီးနော်…ဟီးးးးးး သူများတွေများ… တစ်ရေးဒေါင်နိုးနေဘီ…:D….)
Comment by ဏီလင်းညို — January 1, 2010 @ 7:37 am
Comment by shwunmi — January 1, 2010 @ 9:06 am
ပျော်ရွှင်သော မိသားစုလေးနဲ့ ၂၀၁၀နှစ်သစ်ကို အေးချမ်းပြည့်စုံစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ..
ချစ်တဲ့ အမ ခင်မင်းဇော်
Comment by ခင်မင်းဇော် — January 1, 2010 @ 9:33 am
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.
စာတွေလဲ အမြဲ ရေးနိုင်ပါစေနော်..
Comment by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) — January 1, 2010 @ 9:35 am
Comment by ပီယာ — January 1, 2010 @ 11:54 am
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ပါ မလေးရေ .. စာကောင်းပေကောင်းတွေ အများကြီး ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေနော်.. ညီမတော့ မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဆက်လက်အားပေးနေပါ့မယ် :)
Comment by winkabar — January 1, 2010 @ 1:11 pm
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေးပါ မလေးရေ…….. နှစ်သစ် အခါသမယမှ စပြီး မလေးရဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ စာပေတွေနဲ့အတူ မလေးချစ်သော စာဖတ်သူများကို သုတ ရသ စုံလင်စွာ ပေးစပ်သွားနိုင်ပါစေ။ အောင်မြင်မှုတွေ စထက်တိုးပြီး ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — January 1, 2010 @ 9:28 pm
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါလို့ မလေးနဲ့ တကွ မလေးချစ်တဲ့ မိသားစုဝင် အားလုံးကိုပါ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
Comment by S-C — January 2, 2010 @ 5:21 am
အားလုံးအတွက် ကောင်းသော မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
Comment by Republic — January 2, 2010 @ 5:49 am
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ မမအိမ့်ရေ… ဒီနှစ်သစ်ကစလို့ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကို ချစ်သော မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာ အခုလိုပဲ အဖိုးတန်စာတွေအများကြီးရေးပြီး ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ…း)
Comment by ရွှေပြည်သူ — January 3, 2010 @ 7:07 pm
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ အစ်မရေး)
Comment by မောင်မျိုး — January 4, 2010 @ 5:07 am
နှစ်ကူးပြီး ၆ရက်အကြာဆိုတော့ အတော်ကို နောက်ကျနေတာပါညီမရေ… ဒါပေမယ့် ချစ်မေတ္တာတွေ အပြည့်အ၀ထည့်ထားတဲ့ နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းလေးပါနော်… ချစ်တဲ့ညီမအိမ့် နာမည်လေးနဲ့ လိုက်အောင် ချမ်းမြေ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နှစ်သစ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ 
Comment by တန်ခူး — January 6, 2010 @ 7:24 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:37 AM
ကဏ္ဍ : ခွန်းဆက်